यसरी बेलौतीको पात प्रयोग गर्नुस्, १०० % निको हुन्छ कपाल झर्ने समस्या ! – mero sathi tv
यसरी बेलौतीको पात प्रयोग गर्नुस्, १०० % निको हुन्छ कपाल झर्ने समस्या !
On ७ चैत्र २०७४, बुधबार ०५:२८
धेरैजसो मानिस कपाल झर्ने समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । यस समस्याबाट छुट्कारा पाउनको लागि मानिसहरु विभिन्न उपायलाई अपनाउँदछन् । तर पनि राम्रो परिणाम पाउन सक्दैनन् । आज हामी तपाइँलाई अम्बाको प्रयोग गरी यस समस्याबाट मुक्ति पाउने प्राकृतिक उपायबारे जानकारी दिन्छौं ।
यसले तपाइँको कपाललाई बढाउनमा पनि मद्धत पुर्याउँदछ । यस समस्याको समाधानको लागि अम्बाको पात धेरै नै राम्रो उपाय हो । बैज्ञानिकहरुको अनुसार अम्बामा भिटामिन ‘ बी ’ तत्व प्रचुर मात्रामा पाईने भएकोले यसले कपाल झर्ने समस्यालाई रोकि कपाल बढ्नमा सहयोग गर्दछ ।
एउटा भाँडोमा पानी हाली त्यसमा अम्बाको पातलाई राखेर उमाल्नुहोस् । त्यसपछि यस मिश्रणलाई चिसो हुन दिनुहोेस् । र चिसो भएपछि आफ्नो कपालमा राख्नुहोस् । यसपछि कपाललाई सफा पानीले पखाल्नुहोस् । राम्रो परिणामको लागि सुत्नुभन्दा अगाडि यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
यो कपाल झर्ने समस्याको लागि धेरै नै राम्रो उपाय हो । यसले कपाललाई जरैदेखि बलियो र बाक्लो पनि बनाउँछ । मानिसहरु कपाल झर्ने समस्याबाट छुट्कारा पाउन महङ्गा साधनहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तसर्थ यसको प्रयोगले तपाइँको पैसा र समय दुबै बचत हुन्छ । त्यसैले अम्बाको पातको प्रयोग गरी आफ्नो कपाललाई बाक्लो र आर्कषक बनाउनुहोस्
महिलाहरूको महिनावारी समस्यामा अत्यन्त उपयोगी हुन्छ अदुवा, जान्नुहोस् अन्य ७ फाइदा
प्रचण्डकी नातीनी स्मीता दाहालको आवाजमा प्रचण्ड, केपी र जनार्दनको गीत (भिडियो सहित)
गर्मीयाममा उखुको रस पिउनुको ७ फाइदा
यी सात कुराले स्मरण शक्तिमा ह्रास ल्याउछ, यस्तो छ कारण (भिडियो रिपोर्ट)
बाँसको तामा मन पर्छ ? यस्ता छन् तामा खानुका अनगिन्ती फाइदाहरू (भिडियो)
कस्ता उपायहरु अपनाउदा पिम्पलबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ पुरा पढ्नुहोस् !
प्रेमिका गर्भवती भएपछि प्रेमीले भीरबाट धकेलेर गरे हत्या, शव यस्तो अवस्थामा भेटियो
रबि लामिछानेको कार्यकम बन्द गराउन यस्तोसम्म गरियो L अमेरिकी नागरिक घोषित गरी देश निकाला गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय हुदै अध्यागमन
हुनेवाला बुहारी दिशासँग छोरा टाइगरले खेलेको फिल्मले चर्चा पाएपछि बोले ज्याकी श्राफ, भने छोराले नचिताएको काम गरेकोमा खुशी छु
यदि तपाईको हातको नङमा यस्तो निसानि छ भने २ मिनट समय निकलेर अवश्य पढ्नुहोला
रबि लामिछानेको कार्यकम बन्द गराउन यस्तोसम्म गरियो L अमेरिकी नागरिक घोषित गरी देश निकाला गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालय हुदै अध्यागमन विभागमा उजुरी (सम्पूर्ण तथ्य सहित) L आफ्नो पनि भन्डाफोर गर्ने डरले रबिलाईनै खुइलाउने प्रयास